Fanadinam-panjakana BEPC :: An’arivony ireo mpiadina tsy tonga teto Antananarivo renivohitra • AoRaha
Fanadinam-panjakana BEPC An’arivony ireo mpiadina tsy tonga teto Antananarivo renivohitra
Maro ireo mpiadina tsy tonga niatrika ny fanadinana BEPC, omaly maraina. Miisa valo ambin’ny folo sy roanjato sy arivo, ohatra, ny seza banga nandritra ny taranja Malagasy tamin’ireo efitranom-panadinana ho an’ny Fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra. Ho an’ny foibem-panadinana Lisea Rabearivelo manokana dia valo amby telopolo amby zato no isan’ireo tsy nandray anjara tamin’ny tapany maraina.
“Nizotra an-tsakany sy an-davany ny fanadinana. Mbola afaka manenjika kosa ireo mpiadina tsy tonga satria tsy misy naoty mampihintsana amin’ity fanadinana ity fa ny fitambaran’ny isa azo no mamaritra ny fahafahana na tsia”, hoy Rakotomalala Holy, lehiben’ny foibem-panadinana Lisea Rabearivelo, omaly.
Amin’ny ankapobeny, samy nanamafy ny fahatsoran’ny laza adina Malagasy ireo mpiadina. Nambaran’izy ireo fa efa natao tany am-pianarana avokoa ny ankamaroany. Ny voambolana sy ny hevi-teny tao anatin’ny laza adina no somary nanahirana an’ireo mpianatra sasany. Teny izay anisan’ny fampiasa andavanandro anefa no tao.
“Tsy fantatro ny dikan’ny hoe :“sarambabem-bahoaka”, hoy i Miotisoa sy ny mpiadina telo hafa tao amin’ny Lisea Rabearivelo. “Tsy nataonay tany am-pianarana ny hevitry ny omby eo amin’ny Malagasy”, hoy kosa ny mpiadina iray, teny Antanimena.
Manomboka amin’ny alakamisy hariva ny fitsarana an’ireo taratasim-panadinana araka ny nambaran-dRamananantony Lalaina, lehiben’ny Fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra, omaly. Amin’ny alatsinainy heriny no vinavinaina hanomboka ny fampidirana an’ireo naoty ao anatin’ny solosaina. “Any amin’ny faran’ny herinandro manaraka no tombanana hivoaka ny voka-panadinana”, hoy izy. Hitohy hatramin’ny alakamisy ny fanadinana BEPC. Ny taranja kajy sy teny frantsay no adina hatrehin’ireo mpianatra anio.
Fibatana fonjamby-afrika :: Samy nandrombaka medaly volamena telo i Rosina sy i Ricardo
Fifidianana kaominaly :: Tsy handefitra amin’izay mety ho fahataran’ireo kandidà ny CENI